I-Tracx: Zuza ukuqonda, ukhule uthethathethwano, kunye nokulinganisa ifuthe kwishishini lakho lasekuhlaleni | Martech Zone
I-Tracx: Zuza ukuqonda, ukhule uthethathethwano, kunye nomlinganiso wempembelelo kumashishini akho entlalo
NgoMgqibelo, Julayi 30, 2016 Douglas Karr
Imibutho yamashishini iyaqhubeka nokuvula amandla eendaba ezentlalo. Ukujonga igama, ukucela ingxelo yabathengi, ukubonelela ngentengiso yelizwi ngomlomo, ukukhuthaza umxholo kunye nokunikezela, ukufundisa nokukhulisa ithemba kunye nabathengi. Imidiya yoluntu inikezela ngayo yonke into - ukufumana, ukunyusa, kunye nokugcina.
Isantya solwazi kunye nengcinga esetyenzisiweyo ukudlulisa amaqhinga entlalontle kwishishini kufuna iqonga lokubeka iliso, lokulinganisa kunye nokuphumeza ubuchule beendaba zosasazo.
Isisombululo seTracx sihlalutya kwaye siphucule ubuninzi beedatha, ubume kunye nedatha yengqondo evela kuyo yonke iwebhu yentlalo ukuhambisa ulwazi olunzulu kubathengi, abakhuphisana nabo, kunye nabashukumisayo. Emva koko yenza ukuba olo lwazi lusebenze ngokusebenzisa Injini yokuNgcebeleka kwezeNtlalontle ehambelana nemeko, eyenza unxibelelwano ngobuchule oluhambisa iziphumo zeshishini ezinentsingiselo.
Itracx Ukwahlulahlula oku kube zizinto ezintathu eziphambili -ukuqonda, ukubandakanyeka kunye nomlinganiso:
nokuqonda -Ivumela amashishini ukuba afumane, ajolise kubo kunye nefuthe labaphembeleli. Ukuqonda kuvumela amashishini ukuba afumane abaphulaphuli ngokwejografi, achonge iindawo zokuhlala kunye nokufumana igranular ngokujolisa kwindawo ekuyo. Ewe kunjalo, yenza ukuba zombini ukumamela okubhaliweyo kunye nokubonwayo kunye nohlalutyo lwexesha lokwenyani.
uthethathethwano -Fumanisa kwaye ulawule umxholo onamandla, sebenzisana kuyo yonke intlangano, kunye neshedyuli efanelekileyo kunye nokujoliswa kohlaziyo kunye namanqaku.
Imilinganiselo -Ukulawula nokwandisa amaphulo akho eendaba ezentlalo, chonga amajelo entlalontle asebenza phezulu, thelekisa iziphumo kukhuphiswano lwakho, ulandele imbuyekezo yakho kutyalo-mali, kwaye ulinganise kwaye ulawule izalathi zentsebenzo eziphambili zangaphakathi.
Cela iDemo yeDracx!
tags: ishishini lentlalontleInkunkuma
Umbuso weNtengiso ye-Agile kwi-2016
Okokugqibela, Lixesha lokuthatha umhlala phantsi kwiWWW yakho